दुखद खबर : माछा पाल्ने पोखरीमा डुबेर दुई छोरी सहित आमाको मृत्यु ! «
दुखद खबर : माछा पाल्ने पोखरीमा डुबेर दुई छोरी सहित आमाको मृत्यु !
Published : 21 September, 2020 11:47 am
मोरङमा माछा पाल्ने पोखरीमा डुबेर एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । ग्रामथान गाउँपालिका–४ बनसखण्डीकी ३५ वर्षीय सीता अधिकारी, उनका १३ र ९ वर्षीया छोरीहरुको मृत्यु भएको हो । १३ वर्षीया छोरी पबित्रा र ९ वर्षीया कृतिका पोखरीमा डुबेपछि उद्धार गर्न गएकी सीताको पनि मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालले बताए ।
उनका अनुसार आइतबार दिउँसो माछा पाल्ने पोखरीमा सीताका दुई छोरी पसेका थिए । पोखरीको डिलमा कपडा खोलेर दुई छोरी पसेको देखिएको प्रहरीको दाबी छ । गहिरो पोखरीमा दुई छोरीहरु डुबेपछि उद्धारका लागि आमा गएकी थिइन् । ग्रामथान गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष बैजनाथ विश्वासका अनुसार दाजुको माछा पोखरीमा सीता चारो हाल्न गएकी थिइन् । उनीसँग दुई छोरीहरु पनि पुगेका थिए । गर्मीको समयमा कान्छी छोरी पौडी खेल्न भन्दै पोखरीमा पसिन् । उनका अनुसार कान्छी छोरी कृतिका डुबेपछि निकाल्न भन्दै पबित्रा पोखरीमा पसिन् । बहिनीलाई निकाल्न पसेकी पबित्रा पनि डुबेपछि सीता पोखरीमा पसिन् ।
तर पोखरी गहिरो भएका कारण तीनैजना निस्कन सकेनन् । घर नफर्किएपछि साँझमा खोजी गर्ने क्रममा पोखरी भित्र शव भेटिएको थियो ।प्रहरीका अनुसार सीता दुई छोरीसहित माइतमा बस्दै आएकी थिइन् । उनका श्रीमान नौ वर्षयता सम्पर्कविहीन छन् । घटनाबारे प्रहरीलाई बेलुका ६ बजे जानकारी भएको प्रहरी निरीक्षक ढकालले बताए । जानकारी पाएलगत्तै पुगेको प्रहरीले राति करिब ८ बजे शव पोष्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल विराटनगर पठाएको थियो ।
‘घटनाको प्रकृति हेर्दा पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको देखिन्छ,’ प्रहरी निरीक्षक ढकालले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शंकास्पद विषय भेटिएको छैन ।’ उनका अनुसार कान्छी छोरीले कपडा लगाएकी छैनन् । १३ वर्षीया छोरीले भित्री बस्त्रमात्र लगाएकी थिइन् । आमाको शव कपडा लगाएकै अवस्थामा भेटिएको थियो । दुई छोरीको कपडा भने पोखरीको डिलमै रहेको बताइएको छ ।
रबि लामिछानेले रुदै News 24 छाडेपछि बोले ऋषी धमला ! टिभीले घात गर्यो, रबि देशकै हिरो हो भन्दै गरे तारिफ…..(भिडियो सहित)
५ सेप्टेम्बर सन् १९७४ मा भक्तपुरको बागेश्वरीमा जन्मिएका रवि लामिछाने किशोरावस्थामै कार्यक्रम चलाउँथे । दाजु